Ny Angano Momba Ilay ‘Kanadiana Mahafinaritra’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2017 7:36 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, Français, polski, Deutsch, Português, Nederlands, 繁體中文, Italiano, English
Ned Flanders, Kanadiana. Pikantsary avy ao amin'ny YouTube.
Ny fanontaniana azoko betsaka indrindra tany Japana: “Amerikana ve ianao?”
“Ah, azafady,” hoy aho, “raha ny marina dia avy any Kanadà aho.” Monina any Japana aho, indraindray, nanomboka tamin'ny 1994. Arakaraka ny zava-mitranga, raisina ho fahalalam-pomba ny fanehoana fahalianana amin'ny olona resahanao amin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana momba azy manokana.
“Oh, tendrombohitra feno harambato, lalao hockey an-dranomandry, natiora,” no valinteny mahazatra setrin'ny amin'ny fanazavako. maro ireo Kanadiana mety hitroatra anaty noho ny fampifangaroana azy ireo amin'ny Amerikana, saingy tsy mampaninona ahy izany. Ho an'ny maso tsy zatra, kely dia kely ny fahasamihafàna eo amin'ny Kanadiana sy ny Amerikana. Izany no antony mahatonga ireo Kanadiana maro mametaka ny sainampirenen'i Kanadà mivandravandra eo amin'ny kitapony rehefa mandeha any ivelany. Tian'ny rehetra ny Kanadiana. Ny Amerikana kosa anefa…
Toy izany no zava-nisy hatramin'ny nanombohako nandeha tany ivelany 20 taona lasa izay, efa talohan'i Donald Trump, talohan'ny fanafiham-bohitra an'i Iràka, ary talohan'ny tamin'ny 9/11. Mametraka ravinà “érable” amin'ny entany ireo Kanadiana mba hanavahany ny tenany amin'ireo Amerikana rahalahiny.
Manana fikarakarana ara-pahasalamana maimaimpoana izahay! Tsy misy basy aty! Efa ara-dalàna ny fanambadian'olon-droa mitovy fananahana aty Kanadà nanomboka tamin'ny 2005!
Toa mihevitra an'i Kanadà ho tena kapotsaka ny rehetra. Mahalala fomba izahay. Toa manao “azafady” matetika. Heverina ho firenena be fandeferana indrindra manoloana ireo foko ny Kanadiana. Tsy mitovy amin-dry zalahy hafa any atsimon'ny sisitany. Mahafinaritra izahay Kanadiana.
Voalohany aloha, maro ireo namako Amerikana tena deraiko. Tsy mampaninona ahy, ohatra, ny fampifangaroana ahy amin'i Johnny ary any Dallas. I Marc avy any Austin. I Adam avy any San Francisco. Na i Michael avy any Honolulu.
Ary koa, misy olana vitsivitsy ateraky ny fiantsoana olona ho “mahafinaritra.” Ny voalohany: ny fiantsoana olona ho “mahafinaritra” dia tahaka ny fiantsoana azy ho “mahazatra”, tahaka an'i Ned Flanders avy ao amin'ny “The Simpsons” (izay manana Kanadiana iray mitovy tsy misy valaka aminy), mamy, tsara fanahy saingy mampalahelo fa tsy mahomby mihitsy.
Raha mety ho firenenà Ned Flanders marobe tokoa mantsy i Kanadà dia mety ho fivoarana izany, saingy ny tena olana dia tsy manana ny maha izy azy ny olona mahafinaritra. Tsy misy hasiaka, ary tsy misy na inona na inona mampihemotra azy. Tsy misongadina sy tsy mahaliana ny olona malefaka, tsy mendrika hisintona ny saina. Tsara izany raha toa ka ny hifangaro tanteraka amin'ny loko lafika no fanirianao, ary hijanona lavitry ny zava-mitranga manodidina anao.
Te-hilaza aho fa, raha ny marina, toetra voalohany maha Kanadiana ny faniriana hijanona ho irery sy tsy ho voafatotry ny andraikitra. Zatra tsy miraharaha afa-tsy ny momba anay izahay. Mety ho fahalalam-pomba mangatsiaka fotsiny ihany ilay lazain'ireo vahiny ho toetra “mahafinaritra”. Tsy dia manao resaka ivelan'ny fefy loatra miaraka amin'ny mpiray vodirindrina aminy ny Kanadiana. Tsy ampy ilay finamanana feno hafanàna sy fisokafana zary niarahako tamin'ireo namako Amerikanina izahay.
Soa ihany ho anay (sy ho an'izao tontolo izao), nipoitra i Justin Trudeau mba hahatonga ny Kanadiana hihoatra ny “mahafinaritra”; nahatonga ny firenenay hanaitra amin'ny lafiny tsara ny praiminisitra.
Ranjanana, tsara tarehy, mpanao fanatanjahantena sady mpiaro ny zon'ny vehivavy izy, nanova an'i Kanadà miala aminà firenena iray fantatra fotsiny amin'ny lalao hockey an-dranomandry sy ny ronono amidy anaty harona plastika, ho tonga mandatehezan'ny fandeferana sy fialofana lavitr'ireo olan'izao tontolo izao.
Eny tokoa, nampiova tanteraka ny tsindrimpeon-dahatenin'i Kanadà i Trudeau andro iray monja taorian'ny nahavoafidy azy tamin'ny Oktobra 2015. Taorianà hetsi-panentanana fandraràna ny niqab nahitàna ny Mpitahiry ny fomban-drazana mpifanandrina aminy, tonga dia naka “selfie” miaraka amin'ireo Kanadiana Silamo i Trudeau tao amin'ny Metro an'i Montreal.
Avy eo, nanome toky ny governemanta Trudeau fa hampiantrano mpitsoamponenana 25.000 aty Kanadà tanatinà volana vitsy monja, raha toa ka nisalasala ny hanampy hanena ny krizin'ny mpitsoaponenana kosa ny governemanta teo aloha. Hatreto dia azo lazaina ho lavorary ihany ny drafitry ny governemanta Trudeau momba ny mpitsoaponenana.
Araka izany, tamin'ity 2017 ity, nanomboka nahatsapa ny Kanadiana fa mihoatra ilay mahafinaritra, noho ny fandokafan'izao tontolo izao sy ny fisarihana ara-nofo vao hita tsy ela izay. Mahara-baovao, milay sady mahay mandefitra isika. Saingy tena izay ve?
Satria manakana ihany koa ny fiatrehanay Kanadiana ireo olana fototra sasany ato aminay, izay tsy hiala atsy ho atsy, io angano momba ny “Kanadiana mahafinaritra” io. Manakaiky ny 20% ireo ankizy miaina anaty fahantrana aty Kanadà, ary saika ho antsasak'ireo ankizy avy amin'ireo Firenena Voalohany. Misy krizin'ny toeram-ponenana aty Kanadà, arahina krizin'ny tsy fananana fialofana. Raha miainga amin'ny mponina tsirairay, voalohany eran-tany ny Kanadiana amin'ny famoahana entona manimba ny tontolo iainana.
Samy manana ny olany ny firenena rehetra, mazava ho azy, ary maro ireo zavatra tsara momba an'i Kanadà. (Ankafiziko manokana ny karazanà fanaovan-dabiera vita tànana ao Kolombià-Britanika sy ny “sehatrà mozika vita an-trano” ho an'ireo vao hanomboka) ao Montreal.
Fa aoka izay ilay famantarana ho “mahafinaritra”. Antony iray mahatonga an'i Kanadà tsy dia handray andraikitra izany ary manakana anay hanatratra ny tsara indrindra amin'ny maha firenena anay.